AsteroidOS, nyowani yekushandisa sisitimu wachi kubva paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Smartwatches anga aripo kwemakore mazhinji izvozvi, asi ini ndinofunga pave paine maviri asina simba nguva. Chekutanga kwaive kuuya kwePebble, wachi yakangwara yakanyatsonzwisisa izvo smartwatch inofanirwa kuita: kuva shamwari yeiyo smartphone uye, pakati pezvimwe zvinhu, kuratidza zviziviso. Gare gare kwakauya iyo Apple Watch, smartwatch iyo yaisanganisira akawanda anonakidza maficha. Nhanho inotevera ichave wachi iyo inotsiva zvachose nharembozha, asi zvichave zvakare zvakakosha kuti pane sarudzo senge idzo dzauchapa asteroids.
Pave nemakore akati wandei kubvira isu takanyora paAsteroidOS kekutanga. Panguva iyoyo, mumwe wangu Isaac aitaura nezve yakavhurwa sosi projekiti iyo yakanga ichangobaya GitHub. Nhasi, nhau dzinonyanya kuti chirongwa ichi chiri kuenda kumberi, uye iyo vhezheni 1.0 kuburitswa zvinoratidza izvozvo. Kunge mamwe maLinux-based mobile operating system, senge Ubuntu Kubata, AsteroidOS inogona kuiswa pane aripo mawatch, senge mamwe anobva kuSony kana LG.
AsteroidOS inogona kuiswa pane Android Wear watches
Pakati pezvigadzirwa zvatinogona kuisa AsteroidOS yatinayo:
LG G Tarisa Urbane, Tarisa R uye Tarisa.
Mawachi akafambiswa neMTK6580 spark.
Ticwatch E & S.
Uye chii chinoita kuti AsteroidOS ive yakasiyana nemamwe masystem ekushandisa ewatchwatch? Pakutanga, ndiwe yakagadzirirwa kuve yakavanzika uye yakachengeteka. Dambudziko guru nderekuti, zvirinani panguva yekunyora uku, haina chitoro chekushandisa kwatingawana maapplication anozivikanwa, asi hazvisi izvo zvavanenge vachida. Iyo inoshanda sisitimu iyo, yekuchengetedza madaro uye kufunga nezve basa rayo, inoyeuchidza zvishoma nezveDombo rinotaurwa pamusoro.
Muvhidhiyo inotevera unogona kuona mamwe emabasa ayo akasarudzika.
Inoenderana nemaawa aripo.
En iyi imwe vhidhiyo unogona kuona mashandiro akaita AsteroidOS mumwedzi yekutanga yehupenyu. Ini ndinofunga iri imwe nzira yakanaka kune Android Wear. Unozviona sei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » AsteroidOS, iyo nyowani yekushandisa sisitimu yewachi yakavakirwa paLinux kernel, inosvika vhezheni 1.0
Steam Tamba neProton 4.11-7 iri kunze
OpenTESArena: kuvhurazve kuzadzikiswa kweiyo Vakuru Mipumburu: Arena